Ihe ndi ozo maka ndi nwanyi Ụdị kachasị ọhụrụ 2018 - Buddhatrends
Ihe ndi ozo maka ndi nwanyi Ụdị kachasị ọhụrụ nke 2018
Mee Nkwupụta Ejiji na Ihe Kacha ọhụrụ na Ụbọchị Ọ bụla
Ugboro ole ka ị guzoro n'ihu ọnụ ụlọ gị, n'amaghị ihe ị ga-eyi? Ị na-agba ọsọ, ma ị pụghị ịhọrọ, n'etiti tons of shirts na abụọ nke jeans iji mee ka zuru okè kwa ụbọchị nchikota.
Ọfọn, ọ dị mma, nchọta gị agafeela, dị ka oge ọkọchị na-eru nso, ndị na-eji ejiji na ndị na-ede blọgụ gburugburu ụwa na-enwe obi ụtọ site na nlọghachi nke usoro 90s, eme ihe maka ụmụ nwanyị. Họrọ ihe ga-adị mma dị obi umealama n'aka nke ọzọ eji ejiji na-enweghị mkpa imebi iwu gị.
Ha bụ ihe niile ịchọrọ maka otu uwe. Mbụ, ha na-emefu ego na-akwụ ụgwọ ma dị ọnụ ala. Ọzọkwa, ha bụ n'ezie otu n'ime uwe kachasị mma nke ị nwere ike ịnwe ma e wezụga obere uwe ojii. Ị nwere ike iyi ha n'oge ọ bụla o kwere mee nakwa n'ọnọdụ ọ bụla na oge. Ọ na-esite na nkwekọ kwa ụbọchị nye ndị ahịa na ndị ọrụ, ha dịkwadị mma maka otu abalị. Kedu ihe ndị ọzọ, ha na-agbasi mbọ ike na ụdị ahụ ọ bụla, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị bụ obere, curvy ma ọ bụ dị ogologo.
Maka nchịkọta kwa ụbọchị na-ahọrọ ihe ndị ga-adị mma, nke na-asọba ma na-ahụkarị na ejiji-atụ. Nhọrọ ndị a na-enweghị njedebe ma a bịa n'ịhọrọ nke ziri ezi maka gị. Na-atụ egwu ma kwupụta ezi-gị site na uwe ị na-eyi. Gbanwee obi ụtọ ma na-agwụ ike na-atọ ụtọ ma na-acha ọchị. Iji mee ka ndụ gị na-atọ ụtọ ịhọrọ ụdị ụdị mkpụrụ osisi floral dị iche iche, obere okooko osisi; ntụpọ; osisi nkwụ; ihe ejiji; ihe eji akpa; wdg, nke ga - eme ka njirimara gi na ndi mmadu nwee obi uto ma n'otu oge ahu ga - achikota aru gi. Atụla egwu na ị ga-eji aka gị na-aga, ọ ga-arụ ọrụ dịka "anwansi" ma mezie ọdịdị ahụ gị n'ụzọ ị na - apụghịdị iche n'echiche. Họrọ ihe yiri denim, nke bụ isi owu nke ga-eme ka ahụ gị na-eku ume, ihe ị ga-enwe ekele maka ụbọchị okpomọkụ.
Jikọta ha na t-shirts ma ọ bụ na-ejikọta ha na-atọ ụtọ ma na-egwu egwu, ma ọ bụ na ihe akuku n'elu ga-etinye ụda n'olu gị. O doro anya na ị ga-ejikọta ọnụ ọgụgụ a ma jiri uwe eletrik dị mma, ma eleghị anya site n'ụdị ụfọdụ maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ọ dị mfe na otu agba, ma ọ bụ na ị nwere ike ịchọta ihe ntụgharị nke ga-ezipụ ihe dị egwu, n'okporo ámá, ejiji vibes. Nhọrọ ndị a bụ n'ezie enweghị njedebe, họrọ amamihe iji mee nkwupụta n'eziokwu na igosi ụdị ịkebe. Echefukwala ka ị nweta ọdịdị gị na obere akpa ugogbe anya, akpa nke ga-adaba na uwe gị n'ozuzu, ma eleghị anya akpa akpa ịwụ ma ọ bụ obere akpa tote ma ọ bụ obere akpaa azụ na ihe ịchọ mma minimalistic.
Chefuo ihe i chere "iyi" ị ga-eyi, pụọ na mpaghara nkasi obi gị ma jikọta ihe dị iche iche na ịmepụta n'ezie na-enweghị ihe ọ bụla a ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-anọghị na ìgwè mmadụ ma n'otu oge ahụ, nọgidesi ike n'ebe onwe gị nọ.
PịaEbe a iji lee nnukwu nnakọta nke ihe oriri!